အကြိုက်ဆုံး antivirus ကို vote ပေးကြရအောင် - MYSTERY ZILLION
အကြိုက်ဆုံး antivirus ကို vote ပေးကြရအောင်
November 2009 edited January 2011 in Antivirus & Virus
ကဲ အမ်ဇက်က ဘော်ဘော်တို့မိမိ နှစ်သက်တဲ့ antivirus ကို ဒီနေရာလေးမှာ vote ပေးကြည့်ရအောင်
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလည်း ဆိုတာတော့ ပြောရမယ် အဆင်ပြေပါတယ်နော်:D
အဟင့် ဘာလို ့ကြိုက်တာလည်း ပြောကြအုံးလေဗျာ အဲ့လိုတော့ လုပ်နဲ ့ဂျာ မဟုတ်ရင် ဒီသရက် ထောင်
လိုက်တာက ဘာမှ အကျိုးမရှိတော့ဘူး antivirus ထဲက တစ်ခုခုကို ကြိုက်ရင် ဘာကြောင့် ဘာကြောင့်
ကြိုက်ပါတယ် လို ့တော့ ပြောပြရမှာ ပေါ့ အဲ့တာမှ မသိတဲ့တဲ့သူ တွေကော သိတဲ့သူတွေပါ..ဆွေးနွေးလို ့
ရမှာပေါ့ အခုဟာက vote တော့လုပ်ပါတယ် ဘာမှလည်း ပြောဘူး အဲ့လုပ်မလုပ်ကြပါနဲ ့ဗျာ:77:
ပေါ့တာမှ ရွှတ်နေတာပဲ။ တင်ထားမှန်းတောင် မေ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ၀ယ်သုံးတာ။ (လျှော့စျေးရလို့)
Avg ပါ ။
ဘာလို.လဲဆိုတော. အန်တီဗိုင်းရပ်တွေထဲမှာ အဲဒီတစ်မျိုးပဲသိပြီး။အဲဒီတစ်မျိုးပဲ သုံးဖူး၊သုံးတတ်လို.ပါ။:P
ဒါပေမယ့် အာလေးက Antivirus ကိုပဲရေးထားလို့ Antivirus ကိုပဲ Vote လိုက်တယ်။
ကြိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့ Virus အတော်များများကိုနိူင်လို့ပဲ။ သူက Perfect မဟုတ်ပေမယ့်မဆိုးပါဘူး၊ သုံးလို့လဲကောင်းတယ်။ (Perfect ဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး)
License Version ဝယ်သုံးထားတယ်။
သုံးဖူးတဲ့ kasper တောင်မှာ version 2010/2009 က
တချို့ virus ကိုမနိုင်တော့ version7ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့သုံးနေရပါတယ်..
တပတ်လောက် update မလုပ်ရင်လည်း ဒီ software တွေကအလုပ်မလုပ်သလောက်ပါပဲ..
အ၇င် virus တွေတောင်မှမသိတော့ပါဘူး...
avira နဲ့ bitdefender ကလည်း crack file နဲ့ keygen တွေကိုလိုက်သတ်နေတော့.
အခုတော့ ဒီ anti-virus ဆော့၀ဲတွေကို တခုမရရင်တခုလှည့်ပတ်ပြီးသုံးနေရတာပါပဲ.
လောလောဆယ် သုံးထားဘူးသမျှထဲမှာတော့ kaspersky version7ပီးရင် bitdefender ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ပေါ့လဲပေါ့.. ကဂျီကဂျောင်လဲမကျဘူး. :P
Kaspersky 2010 I.S သုံးပါတယ်...... ကြိုက်ပါတယ်...... အလကားရလို့ပါ....... နေ့တိုင်းတော့ Update လုပ်ပေးနေရတာပေါ့....... သူက Update မဖြစ်ရင် တော်တော်ပိန်းတာ..... တကယ် နှစ်သက်မိတာကတော့ AVG ပေါ့........ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Notepad ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ Virus Coding ကိုတောင် သူက သိတယ်...... Compile တောင်မလုပ်ရသေးဘူး ကိုက်သွားတယ်ဗျာ..... နောက်ပြီး တော်တော်ပေါ့တယ်....... Windows တက်စအချိန်တွေမှာ အသိသာဆုံးပဲ.... ဒါပေမယ့် User Friendly ဖြစ်မှု အပိုင်းမှာတော့ (ကျွန်တော့်အတွက်) Kasper ကို မမှီဘူးဖြစ်နေတယ်..... ဒါကြောင့် Kaspersky ကို ပဲ Vote ပေးလိုက်ပါတယ်......
ဘာပဲပြောပြော ဒီလို၀င်ရေးထားတာကိုပဲ ကျေနပ်တယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့ detail လေးထည့်ပြောရင်တော့
နောနော်ပေါ့ဗျာ:P အနော်ရဲ ့nod32 ကိုဘာကြောင့်မကြိုက်တာလည်း မသိဘူး ဘာပဲပြောပြော အား
တော့ လျှော ့ဘူး အနော်ရဲ ့nod32 ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း လာအုံးမှာပါဗျာ :P kaspersky
သမားတွေ မှတ်ထားနော် ရတယ် ခင်ဗျား တို ့kaspersky ပထမရမလား nod32 ပထမ ရမလားဆိုတာ
တစ်ပတ်ပြည့်ရင်တော့ သိမှာပါ ဟိုလိုတော့ မလုပ်ကြကျေးနော် အကောင့်တွေ နဲ ့အများကြီး၀င်ပြီးတော့
vote မပေးကျေး အမှန်အကန်နော်:P စတာပါ nod32 ကို အနော် ဘာလို ့ကြိုက်လည်း ဆိုတော့
exe ဖိုင်မှန်သမျှကို ချုပ်ပေးထားတယ် crack file တောင် မချန်ဘူး အဲ့တာကောင်းလည်း ကောင်းတယ် မကောင်းလည်း မကောင်းဘူး update လုပ်တာကလည်း ကောင်းမှကောင်းဗျာ online လုပ်မလား ခန
လေး offline လုပ်မလား restart တစ်ခါချလိုက်တာနဲ့ကိစ္စကပြတ်သွားပြီ ဟဲဟဲ virus တော်တော်များ
များလည်း နိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ သူ ့ရဲ့interface ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းတယ် ဒါပေမဲ ့တစ်ချို ့
နိုင်ငံခြားဖိုရမ်တွေမှာတော့ ကိုယ့်ကောင်က နံပါတ်တစ်ပဲ ကျွန်တော်တို ့nod32 သမားတွေအတွက်
update backup file လေးကို ပြန်ရှယ်ပေးမယ် အဆင်ပြေမှပြေတယ်ပြောပါ ကဲပြောတာနဲ ့..
nod32 အကြောင်းဖြစ်သွားပြီ vote ပေးကြပါ တတ်နိုင်သမျှ antivirus တွေသုံးလို့ကြုံတွေခဲ့တာ
လေးကို ရှယ်ကြပါ..ဒီသရက်မှာ ကျေးဇူးတွေပေးနေပါပြီဗျာ :P
kaspersky ပဲကြိုက်တယ်ဗျ အ၇ုိးစွဲနေလို့ထင်တာပဲ ။သုံး၇တာလွယ်တယ်။ အင်တာနက်ချိတ်ထားတော့ ကီးမ၇ှာ၇ဘူး ဟိ။ ဗိုင်း၇ပ်တော်တော်များများနိုင်တယ်။nod32 တော့ကြိုက်ဘူး exit မထွက်တတ်လို့ ။နောက် အပ်ဒိတ်လုပ်တို်င်း ကီးထည့်ထည့်ပေးနေ၇လို့ ။မထည့်၇တဲ့နည်း၇ှိချင်၇ှိမှာပါ ကျွန်တော်မသိတာ။ဟီးးးးးးး ဒုတိယက avira ပေါ့ ။ကျွန်တော်ကတော့ ကစ်စပါနဲ့ အဗ၇ာ နှစ်ခုတွဲတင်ထားတယ်။
November 2009 edited November 2009 Administrators
မဲမပေးရင် အားငယ်နေမစိုးလို့ ဝင်ပေးလိုက်တယ်သိလား McAfee သုံးတာပဲဗျ ဘာလို့ကြိုက်သလဲကတော့ ပြောရအခက်သား အဓိကကတော့ ဝယ်ကတည်းက ၂ နှစ်စာပါလာလို့ သုံးနေတာပဲဘာပြဿနာမှမပေးဘူးလေ သူဟာသူဟုတ်နေတာပဲ ဖမ်းလွန်းလို့ခက်နေတာ ဘယ် Keygen မှမချန်ဘူး အကုန်ဖမ်းနေလို့ တရားမဝင်တာ တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင် ခိုးချင်ရင် တစ်ခြားစက်ပေါ်ကို Keygen သွား Run ရတယ်။
November 2009 edited November 2009 Moderators
အားငယ်မှာစိုးလို ့၀င်တော့ရေးလိုက်တယ် မဲတော့မပေးလိုက်တော့ဘူး ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့
အဲဒီ ဆယ်မျိုးလုံးကျွန်တော်မသုံးဘူးဗျ တခြားဘာသုံးလဲဆိုတော့ microsoft ကထုတ်တဲ့ security essential ပဲသုံးတယ် ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့ ကို လူပျိုကြီးပြောသလို ၀ယ်ကတည်းက window ပါလာတော့ အလကားရလို ့ရယ် အဆင်ပြေလို ့ရယ် ဒါပဲသုံးတယ် ပြောသာပြောတာပါ ကျွန်တော်
window ကြီးနဲ ့နောက်ပိုင်း အင်တာနက်သိပ်တောင်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး :D:D ubuntu လေးနဲ ့ပဲ
နှစ်ပါးသွားနေရတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ လောလောဆယ်တော့ ဘာ virus မှမတွေ ့သေးဘူး
ကျွန်တော်ကတော့ rising သုံးတယ် internet ချိတ်ထားရင် update သူ့ဘာသာသူလုပ်တယ် key မလိုဘူး။
အမေးအမြန်းထူလို့ကြိုက်တာ။ တော်ရုံ နဲ့တော့ registry ကိုပေးမပြင်ဘူး။ startup ထဲလဲပေးမရေးဘူး။
autorun.inf ပါရင် သူrun ခိုင်းထားတဲ့ file ကိုတောင် delete ပေးတယ်။
virus မှန်းသိသိကြီးနဲ့ double click ခေါက်တာတောင် registry ကိုပြင်မလားသူကမေးတုန်း။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် autoexec.bat file တို့ boot.ini config.sys တို့ကို၀င်ပြင်ရင်တောင်
လောလောဆယ်တော့ AVG ကိုကြိုက်နေတယ်...သုံးရတာလည်း လွယ်တယ်...ပထမက bitdefender တင်ထားတာ.. www.roguevampires.net တို့ www.fallenrace.com တို့ RPG တွေ ၀င်လို့မရတော့လို့ ပြောင်းလိုက်ရတယ်... ဒါပေမယ့် bitdefender က laptop mode ဆို battery သိပ်မစားဘူးလို့ပြောကြတယ်...
ကျွန်တော်ကတော့ Kaspersky ကိုပဲ ဗုတ်ပေးတယ်။ သူ့မှာ က user friendly ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။ customize လုပ်လို့ကောင်းတယ်။ တွေ့ကရာရှောက်မသတ်ဘူး။ အများအားဖြင့် Virus တကယ်ဟုတ်မှသတ်တယ်။ Keygen တွေ Crack တွေ နဲ့ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ် ထီးနီလေးနဲ့တွဲထားလိုက်ရင် တော်တော်လုံသွားပြီလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ထီးနီကို Kaspersky နဲ့တွဲပြီးမသုံးဘူး။ အကြောင်းကတော့ဗျာ Virus ကြောင့်ဖြစ်မယ့် အန္တရယ်ထက် Anti-virus အခြင်းခြင်းထချကြမှာကိုပိုကြောက်လို့ပဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ Autorun Killer နဲ့တွဲသုံးထားပါတယ်။
ကိုယောင်စိန်ရေ ထီးနီကိုတော့ သုံးဖူးတယ် ထင်သလောက်မကြိုက်ဖူး UI ကလည်းမလှဘူး နောက်ပြီး keygen တွေဘာတွေထထအော်လို ့သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူး
I use kaspersky7with pirate license.The database data is from march.I don't update it but it still detect most viruses.I like kaspersky for it fast scan rate.All I want to say is, I like it because my ware is almost FREE .
ဘယ် antivirus သုံးရပါ့မလဲလို့ ခေါင်းစားနေတာဗျ ကိုယ်က ဟို exe လေး သိမ်းလိုက် ဒီနားကဟာလေး စုလိုက်နဲ့ဆိုတော့ ... antivius တွေ အကုန်တစ်ခုမှမချန်ပဲ ကိုင်နေတော့ ... ဘာသုံးရမှန်း မသိလောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျ
ဘယ်ကောင်နဲ့ အဆင်ပြေမလဲ ပြောပြကြပါဦး ......
ဘာမှမတင်တော့ လဲစိတ်က မလုံဘူး ...
ကူညီပေးကြပါဦး .. :65:
kasper က user friendly ဖြစ်လို့ ကြိုက်ပါတယ် နောက် update လဲ လွယ်ပါတယ.် key ကတော့ ၆လ တစ်ခါလောက်တော့ ပြောင်းရတယ် , kasper ပြီးရင်တော့ avg ပဲပေါ့:P
Kaspersky ကို အရမ်းကြိုက်သွားလို့..... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ က တော်တော် ဖမ်းလို့ ... ထစ်ကနဲ့ ဆို ဖမ်းတော့တာပဲ ... ပီးတော့ သူက ဖမ်းမိရင် အော်တဲ့ အသံလေး က အရသာရှိလို့ ...ဟဲဟဲ:D
တို့ကတော့ AVG မှ AVG ပဲ...
ဘာလို့ကြိုက်လဲ ... ပုဂ္ဂလိက ခံစားမှုအရ ကြိုက်တယ်...
ပိုက်ပိုက်နဲ့လဲ ရတယ်.. အလကားဆိုလဲ ရတယ်...
Offline Update လုပ်လို့ရတယ်... လွယ်လဲလွယ်တယ်...
တော်တော်များများလဲ သေတယ်... ကဲ ဘာလိုသေးလဲဗျာ....
တကယ်တမ်းတော့ Update ပဲ... ဘယ် AntiVirus ပဲသုံးသုံး
သင်မှန်မှန် Update လုပ်ဖို့တာ၀န်ယူပါ
Virus သတ်ဖို့ကို AntiVirus ကတာ၀န်ယူပါလိမ့်မယ်...
AntiVirus တွေက ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုတော့ နည်းနည်း :2:
:106:Symantec Antivirus လည်း poll ထဲမှာမပါဘူး...ဘာကြောင့်ပါလိမ့်??:106:
ကျွန်တော်ကတော့ Symantec Cooporate Edition ကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ
ဘာ crack ဘာ key မှမလိုဘူး update ကလည်း manual update , live update ကြိုက်တာသူံး
just double click and very easy
ပြီးတော့ antivirus server လည်းရတယ်
very simple interface နဲ့ စက်လည်းသိပ်မလေးဘူး
နောက်ဆုံးကြိုက်တာက generic host for win32 services error နဲ့ explore.exe ရဲ့ error တွေကိုလည်း နိုင်တယ်ဗျ network တစ်ခုလုံးကို လည်း ကာကွယ်ပေးထားနိုင်တယ်
spyware နဲ့ malware တွေကိုလည်း ဖမ်းပေးထားနို်င်တယ်.....
ဒီနေရာကဘဲ vote လိုက်ပီ....ဘုတ်! ဘုတ်! ဘုတ်! (vote သံ)
Avira anitivirus ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာက သူက personal free version ပေးလို့ပါ. တစက်တည်း မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေး သုံးနိုင်လို့ပါ.. update လဲ ရပါတယ်.. ဒုက္ခပေးမယ့် virus တော်တော် များများကိုလဲ သတ်ပေးနိုင်တယ်ဗျ အဲဒါကြောင့်ပါ
Kaspersky ကိုသုံးဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ virus scan စစ်လိုက်ရင် No Thread found ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ Nod 32 ကိုတင်ပြီး စစ် လိုက်တော့ အကောင် 80 ကျော်တောင် ရှိတယ်။ အဲဒီနေ့က
စပြီး Nod32 ကို လုံး၀ လုံး၀ ကြိုက်တော့ တာပါပဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ NOD32 ပဲကြိုက်တယ်ဗျာ..
On Line Update လေးနဲ့ဆိုလို့ကတော့ Good နေတာပဲဗျာ..
On Line Update မရတော့တဲ့အခါကြရင်တော့..ဟဲဟဲ နည်းနည်းဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာ..
Internet နတ်ကကြီးတယ်ဗျ...တစ်ခါတစ်ခါ..စိတ်ပုတ်တတ်သေးတယ်ဗျာ:D:D: ဟားဟားဟား
kaspersky antivirus က update လည်းလွယ်တယ်..ကောင်းလည်းကောင်းတယ်..
တစ်ကယ်ကြိုက်တာက Threatfire နဲ့ Kaspersky Virus Removal Tool ပာ။ ရိုးရှင်းပြီး security ကို အမြင့်ဆုံးတင်ထားရင် မသိတဲ့ threat မရှိဘူးထင်ပာတယ်။ Task Manger လည်းပာတာ Task analyze, Task kill လုပ်တာကောင်းတယ်။ သူမသတ်နိုင်ရင်တော့ KVRT ကိုသုံးတယ်။
သူများသွင်းပေးရင်တော့ free ရတဲ့ Threatfire၊ Avira (သို့) Avast၊ Malwarebyte သွင်းပေးတယ်။ USB အတွက် USB Scan 2.3။ Malwarebyte နဲ့စစ်ပြီးမှဖွင့်ပော့ဗျာ။
အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလို vote ပေးကြတဲ့အတွက်ပေါ့ အများဆုံးကတော့ kaspersky
ပဲပေါ့ ကျွန်တော့အကြိုက်လေးကတော့ ဒုတိယဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ အနော်ရှုံးသွားပြီပေါ့ဗျ:2:
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကြိုက်တာနဲ ့သုံးပါ အဆင်ပြေဖို ့လို ပါတယ်
ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက ကျွန်တော် nod32 သုံးလို ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ခုပြောင်းသုံးတဲ့
အခါကြတော့ ဒီက လူတွေပြောထားတာကို ကြည့်ပြီးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူစမ်းသုံးနိုင်အောင်ပါ
ဘယ်ကောင်က ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာကို လည်း သိသွားအောင်ပါ အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်:6:
kasper8 နဲ့ kasper9 ကိုအကြိုက်ဆုံးပါ
ကျွန်တော်စက်က memory နည်းတယ်လေ
virus တွေ့ရင် alarm အသံကြားရလို့
ိko nauwintun ရေးထားတဲ့ symantec update လည်းကောင်းပါတယ် မသုံးဖူးရင် သုံးကြည့်ကျပါ norton ကထုတ်တာလေ
ကျွန်တော်က avira ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အဲသည့်တစ်မျိုးပဲသုံးတတ်လို့ပါ
'Symantec Endpoint protection' use nay tal... School ka free install lote pay htar lot.. kg ma kg tot.. ma thi.. hee hee
hanmyohtwe wrote: »
you should not use myanglish or burglish. This makes members misunderstand. You should use only pure languages eg English or Myanmar on MZ Forum. Thankalot for your post. Also All of MZ Member have used English or Myanmar Language on this forum.
Don't make angry me. I have to talk to you for the sake of MZ Forum.
ညီတော်ကတော့ NOD32 ကိုဘဲသုံးတယ် သူ့ကပေါ့တယ် auto update လဲမြန်တယ် ဒါပေမယ့် offline update မထုတ်တာတော့ မမိုက်ဘူး
NOD 32 ကိုသုံးလာတာ သုံးနှစ်ရှိပြီ ဘာမှမဖြစ်ဘူး virus နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး nod32 ကိုဘဲအားပေးတယ် :P
စိတ်ကြိုက် Anti-virus ရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး... Update လုပ်ရလွန်းလို့ .
လောလောဆည် ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ Avira 10 ကို USB Disk Guard 5.3 နဲ့ တွဲသုံးထားတာပါ။ Windows7မှာဆိုရင် Virus တော်တော်များများကို အေးအေးဆေးဆေးသတ်နိုင်ပါတယ်။ အ၀င်လည်းမခံပါဘူး။ နောက်ပိုင်းတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့..
Avira Antiver Personal Free Antivirus ကိုသုံးပါတယ် ပေါ့တယ်
ဟီး ... နာနဲ့တူတူပဲ
Avira Clan တောင်ဖွဲ့ရို့ရနေပီ.
Update File ဆွဲရတာလဲအဆင်ပြေတယ်.. File Size ကလဲသေးတယ်နော်..
Kasper က ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမယ့် တကယ်တန်း networking error တက်တော့ Avira က သတ်နိုင်တယ်
Kasper က မသိဘူး ဒါကြောင့် Avira ကို ပိုကြိုက်မိသွားပါတယ်
Avira က ပိုကောင်းတယ်ထင်ပါတယ် Avira ကို အားပေးပါတယ်
I like NOD 32. <br>
နာတတော့ Microsoft Security Essentials ဘဲသုံးတယ်ဗျို့။
Avira Antivirus ကိုသုံးရတာကြိုက်ပါတယ်... အဆင်ပြေလို့ပါ...<br>
Zomb Yard ရေကူညီပါဦး ၊ကျွန်တော် Microsoft Security Essential သုံးချင်လို.ပါ။ဒါပေမယ်.ကျွန်တော်. Windows XP က Copy(Pirate)<br>Version ကြီးဗျ၊ အဲ.ဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်သုံးလို.ရနိုင်မလဲဟင် ၊ပြီးတော. Offline Update ကောရရဲ.လား?<br>
I also like Avira.<br><ul><li>ivdf is easy to download.</li><li>Online OR Offline Update.<br></li><li>Protect most of viruses. <br></li><li>Reliable search engine.</li><li>It is light to operate.</li><li>Easy and user friendly interface.</li><li>FREE!!!<br></li></ul>
<font face="Myanmar3">NOD32 ကုိၾကိဳက္တယ္ ဗ်ာ..အခုေတာ့<br></font>
Thi Ha wrote:
<br>I think you're using Avira9. Try Avira10. But, not ivdf, it's vdf. I used it because it doesn't take too much memory. And detect most infected programs.<br>
<font class="Apple-style-span" size="2">@<;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3; line-height: 22px; "><a href="http://www.mysteryzillion.org/profile/10460/aungkyawzeya"; style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(32, 95, 130); ">aungkyawzeya</a> Yes, bro, please read the link below:</span></font><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3; line-height: 22px; "><a href="http://www.kyawswarnyein.com/2010/09/activators-windows-xp-antiwpa-patch-v33.html"><font class="Apple-style-span" size="2">http://www.kyawswarnyein.com/2010/09/activators-windows-xp-antiwpa-patch-v33.html</font></a></span></div>;
Kaspersky<br>-can get the update file easily and freely.<br>-user support is available in Myanmar if we use license version although we can get crack files<br>-can handle most of the viruses <br>
<div align="justify">Microsoft Security Essentials သုံးပါတယ် - အရင်က ကတ်စပါ သုံးပါတယ် - လေးလို့ စက်ကလည်း သိပ်မနိုင်ချင်တာနဲ့ MSE ကိုပြောင်းသုံးနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ - MSE က သုံးရတာ ပေါ့တယ် - အထိုက်လျောက်လည်း လုံခြုံမှု ရတယ် - အလကားလည်း ရတယ် -- ဘာကီးတွေ ခရက်တွေ ပက်ချ်တွေမှလည်း သုံးဖို့မလိုပါ - နောက်ပြီး Offline update လည်း အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။<br></div><br>ကိုမောင်ဇင်။<br><br>